Banyere Anyị - Shandong Qingyun Machine Co., Ltd
Hyundai Zhonghe Company na-arụsi ọrụ na-arụ na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ, àgwà ndị e kere eke, ahịa mgbasa, na talent e kere eke maka owuwu nke anọ isi oru, iji ime nke ugbua Zhonghe Company n'ime a modernization nke management, ika internationalization, ngwaahịa technology, na ahịa ụwa ọnụ . The ụlọ ọrụ na-agbalị ka ha ghọọ ndị ụwa na-eduga soplaya nke ulo oru na ngwaahịa.
"Mere na China 2025" tinye n'ihu, rube isi na "ọhụrụ-chụpụrụ, àgwà mbụ, green mmepe, bughi njikarịcha, talent na-abara" isi iwu. China si n'ichepụta 2025, bụ-apụghị izere ezere nke mgbanwe na upgrading of China nke n'ichepụta ụlọ ọrụ, na mba akwa atụmanya, Shandong Qingyun igwe ngwá ọrụ na-echebe Cover Manufacturing Co., Ltd., Shandong Qingyun Modern Qing Tai Spring Manufacturing Co., Ltd., Shandong Central German Intelligent Ọdụdọ Manufacturing Co., Ltd., Qingdao Grand Green Wind ike New Energy Development Co., Ltd. Yantai US-Asia Dege Environmental Protection Technology Co., Ltd., Shandong Hao XING Tatsu Pipe Fittings Industrial Co., Ltd. jikotara aka wee esịnede Shandong Hyundai Sinobo nkenke Machinery Manufacturing Co., Ltd. Dabere na nke ugbu a, ogologo oge na-elekwasị anya. Na echiche nke na-egbochi ndị bottleneck na-adịghị ike njikọ nke n'ichepụta mmepe, ọsọ ọsọ mgbanwe na upgrading na rụọ ọrụ ndị ogo na arụmọrụ, ndị isi competitiveness na-adigide mmepe ike nke n'ichepụta ụlọ ọrụ na-akakwa mma. N'ụzọ ziri ezi ghọta ọhụrụ gburugburu nke na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ mgbanwe na ulo oru mgbanwe na-emekarị, na-ewusi usoro atụmatụ na-atụ-na-achọ nkenye ọnọdụ, ala-to-ụwa ntọala, na-eme n'ọdịnihu mpi ogide na-enye elu. The oge a Sinobo ụlọ ọrụ nke na-emezu mmepe nke sayensị na nkà na ụzụ, mma ika, ahịa mmepe, talent ike anọ isi oru, iji wuo ụlọ ọrụ n'ime a oge a na management, ika internationalization, ngwaahịa ọhụhụ, ahịa ụwa ọnụ nke modernization nke ụlọ ọrụ na-agbalịsi ike ịbụ ndị ụwa na-eduga ulo oru ngwaahịa ndị magburu onwe suppliers. Modern Sinobo ndị mmadụ na mmụọ nke "na-ekpo ọkụ, rigorous, pragmatic, n'elu 'kweere, obi ụtọ na-anabata ndị ọhụrụ na ndị agadi ahịa n'ụlọ na mba ọzọ na-eduzi
Dezhou Qingyun County Xinhualu, Shandong Province, China-onwe-asụ ụzọ ogige